Ngathi - Yuhuan Kalilong Metal Products Co., Ltd.
Inkampani yethu ibekwe kunxweme entle East China Sea, Yuhuan, ebizwa ngokuba "idolophu vana China" e Zhejiang. Inkampani yethu kwintshona Wenzhou Port kwaye emantla Taizhou Airport, ukonwabela ulwandle lula kakhulu, umhlaba kunye nomoya transport.Founded ngo-2011, inkampani yethu umenzi ngobuchule butane igesi ukutshiza imipu, imipu idangatye, njl workshop yethu Iquka indawo engaphezu kwe-3000 yeemitha zesikwere, kwaye inabasebenzi bezobugcisa abangaphezulu kwe-100 kunye nabasebenzi beR & D. Amandla ethu obuchwephesha ayintabalala, kwaye izixhobo zethu zemveliso zihambele phambili. Sinoyilo olupheleleyo, ukwenziwa kunye novavanyo. Iimveliso ezikumgangatho ophezulu azithengisi kuphela kwimarike yasekhaya, kodwa zithunyelwa nakwiimarike zaphesheya, ezinje ngeYurophu, iMelika, uMbindi Mpuma, Korea, Japan kunye namanye amazwe kunye nemimandla. Iimveliso ezikumgangatho ophezulu kunye nodumo olulungileyo, siphumelela ukuthembela kwabathengi abatsha nabadala. Sisekele ubudlelwane bexesha elide kunye nozinzo lwentsebenziswano nabarhwebi basekhaya nakwamanye amazwe abathengiselana namathuba kunye nemiceli mngeni, inkampani yethu ihlala inamathela kumgaqo "wokulwela umgangatho wokusinda, kwisayensi nakwitekhnoloji yophuhliso, kubaphathi ukusebenza ".
Intshayelelo emfutshane yeMveliso
Le nkampani ivelisa uthotho jet umpu inoveli isimbo, kulula ukusebenza, kulula ukuyiphatha, ikhuselekile, ithembekile, kwaye iyasebenza jikelele itanki esemgangathweni jikelele, irhasi ifumana lula; Umatshini wamkela i-304 # yentsimbi engenasici, ukukhanya okuqinileyo, ungaze uruse, umlomo, umbhobho wamkele izixhobo zobhedu eziphambili, isixhobo senqanawa phambi kwehashe okanye nawuphi na umsebenzi we-Angle, musa ukuza umlilo ovuthayo, musa ukuzicima ezabo; Ubomi obude obuhlala ixesha elide, kunye nokusetyenziswa, akufuneki ukuba ubushushu, ubushushu bufike kwi-800 ~ 1300 ℃, igesi yebutane njengoko ukusetyenziswa kwepetroli kuqhubekile, umlomo wokusebenzisa izinto ezizodwa zokucoca ukuthintela ukugqabhuka komlilo, okulula, okunoqoqosho, okusetyenziswa ngokubanzi kulungiso lweemveliso ezahlukeneyo, ukubhobhoza amanzi, ulawulo lomlilo lomoya kunye neprojekthi engenawo manzi, imveliso edibeneyo yentambo, ukuwelda umsebenzi wasekhaya, ukufudumeza ukungunda, izixhobo zesinyithi, ezolimo, ifanitshala, iglasi kunye nokulungiswa kokutya, ukufudumeza okunyibilikisiweyo, imfuyo kunye neenkukhu ukususwa kweenwele, ukusetyenzwa kwephepha Itekhnoloji yobugcisa, umhombiso wangaphakathi, ulingo lomzimba kunye neekhemikhali, igadi, inzalo yemfuyo yokubulala izinambuzane, ukukhanya kwamalahle sisixhobo esibalulekileyo sokunyusa intaba yenkampu. Wamkele abathengi abavela ekhaya nakwamanye amazwe ukuba batyelele kwaye babonisane.
3,000-5,000 yeemitha zesikwere
Umzi-mveliso / uMmandla IWujia Village, iChumen Town, iYuhuan County, iTaizhou City, iPhondo laseZhejiang, China
Imveliso yeeLines 6
Ukwenziwa kwesivumelwano Iinkonzo ze-OEM ezinikezelweyo
Ixabiso leMveliso loNyaka I-US $ 2.5 yezigidi- iUS $ 5 yezigidi
Ingeniso iyonke (%)
EMantla Yurophu 12.50%
EMpuma Asia 12.50%
EMiddle East 12.50%
EMazantsi mpuma Asiya 12.50%
EMpuma Yurophu 12.50%
amazantsi emelika 12.50%
amantla Emelika 12.50%